Blog of Nyein Chan Yar: Human Zoo
ဟိုတစ်နေ့က သတင်းထဲမှာ တွေ့လိုက်လို့ပါ။ Shanghai မှာ လူသား zoo ဆိုပြီး မြို့လယ်မှာ မှန်လုံအိမ်နဲ့ ပြမလို့တဲ့။ ဩော်... ထူးဆန်းပါပေ့ ဆရာတွတ်ရယ်။
"They won't turn off the lights or pull down the curtains. They show their whole life, from getting up to going to bed," Karen Chang, the event's organizer, told the Shanghai Daily newspaper.[source]
ဒီ သတင်းကို ဖတ်ရတော့ worth1000 က human zoo ဆိုတဲ့ photoshop ပြိုင်ပွဲကို သတိရမိတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဒီ Ally McBeal မင်းသမီး Calista Flockhart ပုံ ကိုတွေ့တော့ ရယ်လိုက်ရတာ ခွက်ထိုး ခွက်လန်။
သနားပါတယ် သူ့ခမျာ zoo မှာ။ ကျွန်တော်တော့ အိမ်မှာခေါ် မွေးထားလိုက်ချင် ပါရဲ့။
Image >> Eat something Calista by Redbull_UK
more human Zoo at worth1000
Categories / tags: People, funny
Posted by dathana at Sunday, May 14, 2006